Webhost bilaash ah - VipCasting.cz
Webhosting lacag la'aan ah
free, martigelin, internet, aan xad lahayn, aan xad lahayn, webhosting, free, free
Webhostingwaa meel kirada ah oo loogu talagalay bogagga shabakadda ajnabiga shisheeye Deyn bixiyuhu wuxuu loola jeedaa sida martida websaydhka (webspace).
Hel Web Hosting Unlimited Click Click!
Iyadoo marti-geliyeyaasha webka, waxaad ku dhejin kartaa shabakada internetka adiga oo aan haysanin adeeggaaga gaarka ah. Qiimaha qiimaha ugu sareeya ee webka laga soo bilaabo dhowr ah ilaa dhowr kun oo koron bishii. Waxaa sidoo kale jira xulasho bilaash ah, oo lagu magacaabo freehosting. Nidaamka lacag la'aanta ah sida caadiga ah kuma jiraan wax damaanad ah oo ku saabsan shaqeynta, wuxuu leeyahay taageero farsamo oo xadidan. Inta badan, meelaynta goobta waxay la xiriirtaa xor u ah.
Bixiyeyaasha sida caadiga ah la wadaago martigelin dalabyo teknoolajiyada scripting PHP, ASP, ASP.NET, JSP, iwm .., Macluumaadka waxaa la bixiyaa ugu horrayn MySQL, PostgreSQL iyo MS SQL. Bogaga ku jira serverka ayaa inta badan la daabacay iyadoo la adeegsanayo FTP.
Webhosting waa meesha kaliya ee goobta ku yaalla goobta bixiyaha. Si aad u isticmaashid dadka isticmaala Internetka, waxaad u baahan tahay inaad leedahay diiwaan gare (tusaale, magaca shirkada). Haddii kale, shirkadaha qaar ayaa laga yaabaa inay isticmaalaan xanta 3 lacag la'aan. amar, tusaale ahaan vasejmeno.poskytovatel.cz.
Inta badan adeega webhosting waxaa ka mid ah sanduuqa boostada leh antispam iyo fiilooyinka antivirus, boostada boosteejada POP3, boostada SMTP.
Dabcan sidoo kale waxaa jira taageero farsamo macaamiisha, in ay tahay doorasho ay dhacdo dhibaato farsamo ama su'aalo la xiriir bixiyaha telefoonka, e-mail, ICQ, Skype iyo kuwa kale. Mararka qaarkood taageero farsamo ku eg tahay maalmaha shaqada, in shirkadaha adag waxaa taageero aan kala joogsi lahayn.
Caqabada ugu weyn ee martigelinta webka waa in hal bixiye bixiye badanaa ay wadaagaan boqolaal ama xitaa kumanaan macaamiisha martigelinaya macaamiisha. Marka, haddii ay dhacdo hal khaldan ama xadidan, waxaa laga yaabaa inaad saameyn ama xiitaa xitaa qof kasta oo kale oo isku mid ah. Faa'iidada, dhinaca kale, waa qiimaha hoose - macaamiisha ee martigaliyaha webka wuxuu bixiyaa oo kaliya jajabka ah inta ay ku kici doonto server-ka gaarka ah.
Webka la wadaago - qaabka aasaasiga ah ee shabakada martigelinta halkaas oo user uu ka shaqeeyo hal domain 2. amar
Multihosting - marti gelinta domains badan. Caannimadu waxay korodhay gaar ahaan dadka qaba meelyo yar yar ama mikro-yari.
Server Virtual - Mashiinka loo yaqaan 'virtualizedized' kuwaas oo bixiya nidaam aad u fiican iyo waxqabad weyn. Si kastaba ha ahaatee, saamiga waxtarka / qiimaha ma'aha sida ugu wanaagsan ee xalalka hore u sabab ah culeyska. Waxaa si gaar ah loogu talagalay dadka isticmaala aqoonta Linux iyo kuwa aan martida ahayn. Nidaamka caadiga ah ee loo adeegsado server-ka waa mid loo yaqaan server-ka gaarka ah.
Nidaam la maamulay - bixiyuhu wuxuu kiraystaa adeegga macaamilka ee macaamiisha, kaas oo sidoo kale lagu taageero taageerada farsamada. Mid ka mid ah xalka ugu kharashka yar.
Nidaam gaar ah - Server sublet oo maamula macaamiisha. Ma jirto wax khatar ah oo ku yimaada xasilooni darida ama culeyska oo sababay codsiyada macaamiisha kale. Muuqaal muhiim ah oo ka mid ah server-u gooni ah waa cinwaanka IP gaar ah.
Macmiilka - Goobta mashiinkaaga ee kuugu jirta telefoonkaaga.
CloudHosting - Maanta ayaa sidoo kale bilaabay CloudHosting cusub oo awoodda macaamiisha ah ee kaydka xogta shakhsiga ku meel disk aad loogu talagalay tayada martigelin oo aan haysan cid saddexaad.
Hababka kale ee cusub ee martigelinta codsiyada waaweyn waxaa ka mid ah CRM, Exchange iyo adeegyada kale ee SaaS.